लगातार दोस्रो पटक नेपाललाई एसीसी यू–१६ इस्टर्न रिजनको उपाधि - Everest Dainik - News from Nepal
लगातार दोस्रो पटक नेपाललाई एसीसी यू–१६ इस्टर्न रिजनको उपाधि
काठमाडौं, वैशाख १५ । थाइल्याण्डमा भएको एसीसी यू–१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपालले जितेको छ । आज फाईनल खेलमा मलेसियालाई ५९ रनले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको हो ।
नेपालले अघिल्लो संस्करणको उपाधि पनि हात पारेकाे थियो । आज १ सय ४१ रनको विजयी लक्ष्य पछ्पाएको मलेसिया ३४.५ ओभरमा ८१ रनममा अल आउट भयो ।
याे पनि पढ्नुस किन स्थगित भयो नेपाल र मलेसियाबिचको मैत्रिपूर्ण खेल?
मलेसियाका लागि मोहम्मद हजीक आइमनले १८, वान मोहम्मद आजमले १६ र जिनेन्द्र मुरलीले १४ रन बनाउन बाहेक अन्य कुनैपनि ब्याट्सम्यानले सम्झनयोग्य प्रर्दशन गर्न सकेनन् ।
बलिङमा नेपालका विशाल कुमार पटेलले ४, दिपक बोहोराले ३, निखिल कुमार सिंह र कृष कार्कीले एकएक विकेट लिए । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको नेपालले निर्धारित ३५ ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १४० रन बनायो ।
याे पनि पढ्नुस नेपाललाई चौंथो सफलता, सोमपालले लिए लगातार २ विकेट ! [अपडेट]
नेपालका लागि प्रशान्त महतले सर्वाधिक ४०, दिपक बोहोराले २३, कप्तान बिशाल बिक्रम केसीले १७, निखिल कुमार सिंहले १३ रन बनाए । नेपालका अन्य खेलाडीले दोहोरो अंक छुन सकेनन् । मलेसियाका सचिनु हित्तेजले ३ तथा जिनेंद्र मुरालेले २ विकेट लिए ।
याे पनि पढ्नुस मलेसियालाई लगातार झड्का, सन्दिपले नै लिए दोस्रो विकेट ! [LIVE]
ट्याग्स: Nepal Vs Malesiya